सामाजिक सुरक्षा कोषमा ३४७६ कम्पनी दर्ता :: Setopati
सामाजिक सुरक्षा कोषमा ३४७६ कम्पनी दर्ता
सरकारले तामझामले शुरु गरेको योगदानमा आधारीत सामाजिक सुरक्षा कोषमा असार २४ सम्म ३ हजार ४ सय ४७ रोजगार दाता कम्पनीमात्र दर्ता भएका छन् । गत मंसिरदेखि योगदानमा आधारीत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालनमा आएको हो ।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यलयमा दर्ता भएका करिब २० लाख कम्पनी मध्ये अहिले २ लाख कम्पनी सकृय रहेका अनुमान छ। त्यसलाई आधार मान्दा अहिले सम्म जम्मा १.७३ प्रतिशत मात्रै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता भएका छन् ।
कोषकाअनुसार सबैभन्दा धेरै प्रदेश तीनबाट मात्रै २ हजार २ सय ४९ कम्पनी दर्ता गराएका छन् । जसमा काठमाडौं जिल्लाबाट मात्रै १ हजार ४ सय ९२ कम्पनी छन् ।
प्रदेश १ बाट १ सय ८९, प्रदेश २ बाट १ सय ७७, प्रदेश ५ बाट १ सय ३५ कम्पनी कोषमा दर्ता भएका छन् । गण्डकी प्रदेशका १ सय २६ कम्पनी सामाजिक सुरक्षा कोषमा दता हुदाँ सुदुरपश्चिम प्रदेशका ४६ कम्पनी र सबैभन्दा कम कणली प्रदेशका २६ कम्पनी सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता भएका छन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा प्रदेश नखुलेका ५ सय २८ कम्पनी छन् ।
क्षेत्रगत रुपमा सबैभन्दा धेरै शिक्षा क्षेत्रका फर्म कोषमा दर्ता भएका छन् । कोषका अनुसार ८ महिनामा ३ सय ५ व्यवासायी दर्ता भएका छन् । त्यस्तै, स्वास्थ्य तथा सामाजि कार्य क्षेत्रका २ सय ४९, वित्तीय क्षेत्रका २ सय १२, होटल तथा रेष्टुरेन्टका १ सय ९१, जनप्रशासन क्षेत्रका १ सय ८४ कम्पनी दर्ता भएका छन् ।
त्यस्तै, उत्पादन क्षेत्रमा १ सय ३८ र १ सय ३० होलसेल व्यापारीहरु, निर्यात कर्ताहरु कोषमा दर्ता भएको कोषले बताएको छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, असार २५, २०७६, १३:१०:००
कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक आज: के छन् एजेन्डा?
धमाधम नेताहरू भेट्दै अमेरिकी राजदूत
घर बनाउँदा कुन सिमेन्ट प्रयोग गर्ने? के छ ओपिसी र पिपिसीको विशेषता
प्रचण्डलाई ओलीको कटाक्ष- तिल्के गोरुको सिङ फुस्किसक्यो, फाँफाँ–फूँफूँ नगरे हुन्छ
'हिजो नारायणहिटीबाट नागार्जुन जान हुने, आज बालुवाटारबाट बालकोट फर्कन नहुने?'
फोटो पत्रकार क्लबद्वारा बालुवाटारमा भएको हस्तक्षेपको विरोध
ललितपुरको फर्सिडोलस्थित बागमती नदीमा एक पुरूषको शव फेला
अवैध रूपमा अन्तर्वार्ता लिने एसओएस मेनपावरलाई मन्त्रीले दिए उन्मुक्ति
अनुगमन जाँदा मिडिया प्रयाेग गरी ‘ब्ल्याकमेल’ गरियोः म्यानपावर व्यवसायी
जनगणनाको लागि गणक तथा सुपरिवेक्षक पदमा भर्ना खुल्यो
कृषि विकास बैंकले माग्यो अधिकृतसहित ३२६ कर्मचारी
वेरोजगारलाई शिक्षा मन्त्रालयले तीन महिने सीपमुलक तालिम दिने
हाम्रो परिवारको त्यो कालो दिन... तेज काफ्ले
वचनको पक्का रहेछौ कमल शिशिर